HS:- Magaalada B/weyne oo ay ku dhiban yahiin shan kun oo qoys kadib
Posted by admin on September 29 2012 14:05:20
HS:- Magaalada B/weyne oo ay ku dhiban yahiin shan kun oo qoys kadib markii ay halkaas ku dhufteen daadad xoogan,Wararkii ugu danbeeyey iyo B/weyne oo jaaliayda reer Hiiraan ee qurbaha looga codsanayo gurmad deg deg ah.(SAWIRO)
HS:- Magalaada B/weyne ee xarunta Hiiraan ayaa laga yaabaa inye ka dhacdo masiibo bini'aadaminimo tii ugu xumeyd kadib markii roob socday in ka badan 9 saacadood uu magaalada harqiyey xili ay dadku hurdayeen.
Inta badan magaalada waxaa ku jira biyo waxaana ku godoonsan shacab badan oo u badan caruur iyo waayeel, waxaa gabi ahaan xiran isku socodka magaalada waxeyna dadku uga baxayaan magaalada hadba meeshii ay ku nabadgali karaan. dhibaatda ugu badan ayaa hada waxey heysataa caruurta, dumarka iyo dadka waayeelka.
Marka laga reebo shacabka oo iyagu is caawinaya iyo ciidamada dowlada jaboouti oo hada waxoogaa gurmad ah laga helay ma jirto wax haba yaraatee gurmad ah oo shacabkaas gaaray ilaa hada. maadaama aysan wadanka ka jirin dowlad xoogan oo dalka dhan ka talisa meelkasta oo dalka ka mid ahne gurmad gaarsiin karta waxey u badan tahay in ay masiibo bini'aadamino oo xoogan ay ka dhacaan magaalada B/weyne oo ay biyahii ku soo rogmaday ku jiraan gudaha magaalada xili ay ku xaniban yahiin shacab badan qeybo ka mid ah magaalada oo ah mid aad u weyn oo aan maalin iyo labo maalin wax looga qaban karin.
In ka badan 5000 oo qoys ayaa la xaqiijinayaa iney wax yeelo u geysteen biyahii dhawaan ka dhashay roobab xoogan oo ka da'ay magaalada B/weyne iyo hareeraheeda.
Sikastaba waxaa si weyn gurmad looga codsanayaa jaaliayda reer Hiiraan ee qurbaha oo inta badan marka ay dhacaan masiibadan oo kale gurmad la gaari jiray shacabka marka la eego gurmadkii xooganaa ee ay la gaareen sanadkii tagay shacabka Hiiraan xili ay halkaasi ku dhufteen abaaro xoogan oo galaaftay dad iyo duunyaba. sidoo kale waxaa magaalada ka jira dhibaato xoogan kadib markii ay dhamaan jabeen ceelashii biyaha taasi oo qasaaraha ka dhigtay mid baaxadweyn maadaama ay biyaha ugu badan ka imaanayaan tubooyinka ceelashii magaalada siin jiray biyaha.
Dhibaatada ay leetahay dowlad la,aanta?
Marka dib loo eego xiligii ay jirtay dowladii Kacaanka amaba dowladii dhexe horaantii siteetameeyadii waxaa sidan oo kale magaalada ugu soo fatahay biyo ka badan kuwan laakinse xiligaasi waxaa la sameynayey gurmadyo waaweyn maadaama ay dowladii xiligaasi jirtay la socotay qiyaasta biyaha kadibna la dhisi jiray kanaalo waaweyn si loo yareeyo qasaaraha ay keysan karaan biyaha maadaama ay dowlada Soomaaliya iyo midii Ethopia ee xiligaasi jirtay wada shaqeyn jireen.
Maanta xaaladu waa sidee?
Maanta iskaba daa inba la ogaado heerka ay biyahu la eg yahiine waxaan wax laga qaban karin in la quudiyo shacaka ka barakacayo masiibadan oo guryahooda ka maqan. waxaa jira hayado magac ahaan intooda badan gudaha Hiiraan ka howl galo kuwaasi oo iskugu jira kuwo mararka loo baahan yahay dad caawiya iyo kuwo magac ahaan u jooga magaalada B/weyne oo aan marnaba soo dhaafin dalka Kenya.
Ugu danbeyn jaaliyada rer Hiiraan ayaa iyagu loogu baaqayaa in aysan sahlan masiibadan maadaama aysan wadanka ka jirin dowlad xoogan oo ay gacanteedu gaari karto meelkasta oo dalka kamid ah.
La soco wararkeena danbe iyo arimaha Hiiraan